မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ (စတုတ္တ) အစည်းအဝေး မတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ ? | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ (စတုတ္တ) အစည်းအဝေး မတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ ?
မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ (စတုတ္တ) အစည်းအဝေး မတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ ?
❖ လာမယ့် ဩဂုတ်လ (၁၉) ရက်နေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပဖို့ ရှိနေတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ (စတုတ္တအကြိမ်မြောက်) ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မြောက်ပိုင်းက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၇ ဖွဲ့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (FPNCC) သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က ‌ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
❖ ဒီလို မတက်ရောက်ဖို့ ဘာကြောင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ် ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလဲဆိုတာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဆရာဦးသန်းစိုးနိုင်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
❖ အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာတော့ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ပြန့်ပွားနေချိန် နယ်စပ်ဒေသတွေရဲ့ ဆေးဝါးကုသမှု အခက်အခဲနဲ့ ခရီးသွားလာရေး အခက်အခဲတွေဟာ FPNCC အဖွဲ့ဝင်ခြောက်ဖွဲ့ ညီလာခံ မတက်‌ရောက်နိုင်တဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားသလို ရခိုင့်တပ်မတော် (AA) ကို အစိုးရက ညီလာခံတက်ဖို့ မဖိတ်ကြားတဲ့အ‌ပေါ် များစွာစိတ်မကောင်း ဖြစ်မိကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။
Previous articleUEC က ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (PACE) ကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ခွင့် ပိတ်ပင်
Next articleစစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းသူ (၆၈၅) ဦး အထိရှိ